Madaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay Safiirka Czech Republic - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Madaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay Safiirka Czech Republic
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley safiirka dalka Czech Republic u fadhiya Addis-ababa, Amb. Jaroslav Zukersein oo safar ku jooga Somaliland.
Kulankaas waxa lagaga wada hadlay iskaashiga xidhiidh rasmi ah oo dhexmara Somaliland iyo Czech iyo sidii ay labada dhinac uga wada shaqayn lahaayeen horumarinta waxbarashada, gaar ahaan farsamada gacanta, arrimaha ganacsiga iyo isu-socodka labada shacbi.
Sidoo kale, waxa uu madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi uu warbixin mugleh ka siiyey weftiga, horumarka iyo wax wada-qabsiga dawladnimada Somaliland ay halkan ku soo gaadhay, inay tahay isfahanka iyo wada shaqaynta dawladda iyo shacbigeeda oo heegan buuxa u ah inay ka mid noqdaan beesha caalamka, kana helaan wixii ay xuquuq ku leeyihiin, iyagoo buuxiyey shuruudihii dawladnimo ee looga baahnaa oo dhan.
Ugu danbayntiina waxa uu kulankaasi ku dhammaaday is af-garad buuxa iyadoo madaxweynuhu uga mahadceliyey safiirka safarka shaqo ee uu ku yimid Somaliland.
Previous articleRooble oo ugu baaqay Madaxda Garsoorka in ay caddaalad falaan
Next articleShir looga hadlaayo Ammaanka oo Muqdisho ka furmay